१३ औं सागका पाहुनालाई काठमाडौं महानगरपालिकाद्धारा रिसेप्सन पार्टी
२०७६ मङ्सिर ९ सोमबार, काठमाडौं । मंसिर १५ गतेदेखि आयोजना हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मा सहभागीता जनाउन आउने विदेशी पाहुनालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले रिसेप्सन पार्टी दिने भएको छ । ... बाँकी अंश»
सार्क स्तरीय बुद्धिचाल प्रतियोगिताको लागि थापा र नेपाल बंगलादेश प्रस्तान
२०७६ मङ्सिर ८ आइतबार, काठमाडौं। सार्क स्तरीय बुद्धीचाल प्रतियोगितामा सहभागि हुन नेपाली टीम आइतवार बंगलादेश लागेको छ। एसियन एमेचर बिजेता क्यानिडेट मास्टर कृष्ण थापा र दोस्रो भएका प्रकाश नेपालले सो प्रतियोगितामा सहभागि जनाउने छन्। उनीहरु दुबै जना गजुरमुखी चेस क्लवसग आवद्ध खेलाडी समेत हुन्। सोही टोलीमा अन्तराष्ट्रिय आर्बिटर उमेश केसी समेत बंगलादेश गएका छन्। ... बाँकी अंश»
बार्सिलोना र रियाल मड्रिडको अन्तर एक गोलको
२०७६ मङ्सिर ८ आइतबार, काठमाडौं । स्पेनिश लिग फुटबलमा १३ औं चरणको समाप्तिसम्म उपाधिका दुई दावेदार टिमहरु बार्सिलोना र रियाल मड्रिडबीचको गोलको अन्तर केबल एक गोलमा सीमित भएको छ । ... बाँकी अंश»
मौरिन्हो आएपछि जित्यो टोटनह्याम, शनिबार राति आठ खेलमा २५ गोल
२०७६ मङ्सिर ८ आइतबार, काठमाडौं । इंगलिश प्रिमियर लिग फुटबलमा शनिबार राति आठ खेल भएका छन् । जसमा २५ गोल भएको छ । ... बाँकी अंश»
तेह्रौं सागमा ३१७ स्वर्णसहित १११५ पदकका लागि भिडन्त, सबैभन्दा बढी पौडीमा ३८ स्वर्ण
२०७६ मङ्सिर ८ आइतबार, अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री तथा जज र जुरी गरि ६ सय १३ जना नेपाल आउने छन् भने राष्ट्रियस्तरका रेफ्री तथा जज र जुरीको संख्या ७ सय ३२ जना रहेको छ । यस्तै प्राविधिक सहायकको रुपमा ६ सय ९० जनशक्ति परिचालन हुने छन् । ... बाँकी अंश»
२०७६ मङ्सिर ७ शनिबार, कास्की। आगामी १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद(साग)अन्तर्गत पोखरामा सञ्चालन हुने आठ खेलमा ६६२ खेलाडी सहभागी हुने भएका छन्। मङ्सिर १५ गते देखि २४ सम्म आयोजना हुने सागमा २७ खेल समावेश गरिए पनि नेपालबाहेक अन्य देशबाट खेलाडी दर्ता नहुँदा प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता नहुने निश्चित भएको छ। ... बाँकी अंश»
सागका लागि फुटबलको ‘ड्र’ सार्वजनिक, कसको भिडन्त कोसंग ?
२०७६ मङ्सिर ७ शनिबार, काठमाडौं । नेपालमा आयोजना हुँदै गरेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को फुटबलको पुरुष तथा महिलातर्फको खेलतालिका सार्वजनिक भएको छ । ... बाँकी अंश»
सागको उद्घाटनमा दीप प्रज्ज्वलन गरिने ओलम्पिक टर्च र्याली सुरु, देश डुलेर फर्किन्छ १५ गते रंगशालामा
२०७६ मङ्सिर ७ शनिबार, काठमाडौं । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३ औं संस्करणको उद्घाटन दिन मंसिर १५ गते दीप प्रज्ज्वलन गरिने ओलम्पिक टर्चको र्याली शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । ... बाँकी अंश»
पोखरा रंगशालाको दुबो कोलकाताबाट, प्यारापिटको सामान फ्रान्सबाट
२०७६ मङ्सिर ७ शनिबार, पोखरा । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) लक्षित निमार्ण गरिएको पोखरा फुटबल मैदानको ग्यालरी ‘सी’ अन्तर्गतको विशिष्ट श्रेणी सहितको प्यारापिटमा सिट जडान गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
पाकिस्तान–अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड–इंगल्याण्ड टेष्ट क्रिकेटमा यस्तो छ अवस्था
२०७६ मङ्सिर ६ शुक्रबार, काठमाडौं । पाकिस्तान र अष्ट्रेलियाबीचको पहिलो टेष्ट क्रिकेटमा अष्ट्रेलिया बलियो स्थितिमा पुगेको छ । ब्रिसबेनमा जारी खेलमा पाकिस्तानले पहिले ब्याटिङ गर्दै २४० रन बनाएको थियो । ... बाँकी अंश»
गुलाबी बलमा भारत र बंगलादेशबीच पहिलो डे–नाइट टेष्ट
२०७६ मङ्सिर ६ शुक्रबार, काठमाडौं । गुलाबी बलमा भारत र बंगलादेशले पहिलो पटक डे–नाइट टेष्ट क्रिकेट खेल्दैछन् । भारतको कोलकातामा शुक्रबार दिउँसो १ः१५ बजेदेखि गुलाबी बलमा भारत र बंगलादेशले आइसीसी वल्ड टेष्ट च्याम्पियनसिप अन्तर्गतको पहिलो टेष्ट खेल्न लागेका हुन् । ... बाँकी अंश»
सागबारे मुख्यमन्त्री गुरुङले भने –‘प्रदेशको तर्फबाट आवश्यक बजेट दिन्छौँ’
२०७६ मङ्सिर ६ शुक्रबार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरा रंगशालाको निरिक्षण गरेका छन् । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) तयारीको लागि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पोखरा रंगशालाको निरिक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले पुर्वाधार निर्माणको लागि केहि रकम तत्कालै क्याविनेट बैठक बसी विनियोजित गर्न सक्ने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
सागको ओलम्पिक टर्च सुरु, सातै प्रदेशमा कहिले कहाँ ? को को सहभागी ?
२०७६ मङ्सिर ६ शुक्रबार, काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को ओलम्पिक टर्च सातै प्रदेशमा पुर्याइने भएको छ । ओलम्पिक टर्च र्याली व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल खेलाडी तथा प्रशिक्षक संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सोको जानकारी गराएको हो । ... बाँकी अंश»
पोखरामा फुटबल मैदानको प्यारापिट धमाधम जोडिँदै
२०७६ मङ्सिर ५ बिहिबार, पोखरा । मंसिर १५ गतेदेखि सुरु हुन लागेको दक्षिण यसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गतको महिला फुटबल प्रतियोगिता पोखरामा हुँदैछ । सोही प्रतियोगिताका लागि बुधबारबाट धमाधम प्यारापिट जोड्ने काम भइरहको छ । ... बाँकी अंश»
ओरालो लागिरहेको स्पर्शलाई सम्हाल्न आए मोरिन्हो
२०७६ मङ्सिर ४ बुधबार, एजेन्सी। प्रिमियर लिग फुटबलको क्लब टोटेनह्याम हटस्पर्शले नायँ व्यवस्थापकमा जोसे मोरिन्होलाई भित्र्याएको छ। मंगलबार मात्र माउरिसियो पोचेतिनोलाई व्यवस्थापकबाट हटाएको स्पर्शले बुधबार मोरिन्होलाई भित्र्याएको हो। ... बाँकी अंश»
युरोकप छनोटका १० खेलमा ३९ गोल, वेल्ससहित यी टिम छानिए
२०७६ मङ्सिर ४ बुधबार, काठमाडौं । युरोकप छनोट फुटबलमा मंगलबार राति १० खेल भएका छन् । बुधबार बिहान सम्पन्न भएका खेलमा ३९ गोल भएको छ । वेल्स भाग्यमानी सावित भएको छ । ... बाँकी अंश»
१३ औं सागमा २८ खेल, ५९९ नेपाली खेलाडी प्रतिस्पर्धामा, पाराग्लाइडिङ हट्यो
२०७६ मङ्सिर ४ बुधबार, काठमाडौं । नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपाललबाट ५९९ खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर विशेष तयारी गरिएको राष्ट्रिय टिम तयारी समितिले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
भुटानलाई गृह मैदान बनाउनु परेको नेपाल कुवेतसंग पराजित
२०७६ मङ्सिर ३ मंगलबार, काठमाडौं। विश्वकप २०२२मा हुने फिफा विश्वकपको दोस्रो चरणको छनौट खेलमा नेपाल कुवेतसँग १-० गोल अन्तरले पराजित भएको छ। ... बाँकी अंश»
मेस्सीको गोलले जोगियो अर्जेन्टिना हारबाट
२०७६ मङ्सिर ३ मंगलबार, काठमाडौं । स्टार फुटबल खेलाडी लियोनल मेस्सीले व्यवसायीक फुटबलमा आकर्षक खेल खेले पनि देशका लागि राम्रो खेल्न नसकेको आरोप सन् २०१६ देखि लाग्दै आएको छ । ... बाँकी अंश»
युरोकपका ८ खेल ३६ गोल, को को छानिए ?
२०७६ मङ्सिर ३ मंगलबार, काठमाडौं । युरोकप छनोट फुटबल अन्तर्गत सोमबार राति ८ खेल भएका छन् । ८ खेलबाट ३६ गोल भएको छ । खेलमा इटाली र स्वीट्जरल्याण्ड बर्सिएका छन् । ... बाँकी अंश»